Typoman Mobile Review - PX
Typoman Mobile Review
Limbo လို့ ပြောလိုက်ရင် Black & White only သုံးပြီး Simple Graphic, Gameplay ကောင်းကောင်းနဲ့ ဆုတွေယူပြသွားတဲ့ဂိမ်းမှန်း Gamer တွေ မျက်မှန်းတန်းမိကြမှာပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဘော်ဒါတစ်ယောက်ရဲ့ PC မှာ မြင်မြင်ချင်း သဘောကျမိပြီး တစ်ထိုင်တည်းအပြီးဆော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂိမ်း။ Android Version ထွက်လို့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် Limbo ဆော့အပြီးမှာ မတင်းတိမ်သေးတဲ့စိတ်ကြောင့် Playstore ရဲ့ Game Suggestion ထဲကဒီဂိမ်းကို ဆော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆို ပိုမှန်မယ်။ တကယ်လည်း အချိန်ပေးရကျိုးနပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အစအဆုံး ဆော့ပြီးချိန်မှာတော့ Typoman ဟာ ကိုယ်တွေရဲ့ ပထမဆုံး Review ရေးဖြစ်တဲ့ Mobile game တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
Genres: Platform, Puzzle.
Developers: Brainseed Factory
First Release: Nov, 2015 on Wii U.
Mobile Version: Feb, 2019.
ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ မြို့တစ်မြို့ရဲ့ Truck တစ်စီးပေါ်က ပစ်ချလိုက်တဲ့ အမှိုက်တွေထဲ “O” ဆိုတဲ့ Alphabet လေးလည်း အပါအဝင်ပေါ့။ အသက်ရှိတဲ့ အဲဒီ “O” က သူ့အတွက်လိုတဲ့ ခြေ၊ လက်၊ ခန္ဓာကိုယ် တွေကို ရှာဖွေတာကနေ “Hero” ဆိုတဲ့ Character လေးဖြစ်လာပုံကို ဇာတ်လမ်းနဲ့မပြပဲ ကိုယ်တိုင်ကစားခိုင်းပြီး မိတ်ဆက်ပေးတာလေးက First Impression အနေနဲ့ အတော်မိုက်တယ်။ “မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာမရှိပဲ Hero ဆိုတာ ဘယ်ဖြစ်လာမလဲ” ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှု၊ စွမ်းအားတွေနဲ့ Evil ကို ဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲဆိုတဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ Story ကို အခြေခံထားတယ်။
Puzzle Game ဖြစ်တဲ့အလျောက် ဒီဂိမ်းရဲ့အနှစ်သာရက “Words” တွေအပေါ် အခြေခံထားတယ်။ နေရာ၊ အခြေအနေအတော်များများမှာ လိုအပ်တဲ့စာလုံးတွေကို ရှာဖွေ၊ စီရီပြီး Puzzle တွေကို ကျော်ဖြတ်ရမှာပါ။ ရန်သူတွေကိုလည်း DOOM, GORGED, HATE တို့လိုစာလုံးတွေပေါ်မူတည်ပြီး ဖန်တီးပေးထါးတာ သဘောကျစရာ။ အထူးသဖြင့် လိမ်လည်ခြင်း “LIE” ကို အကောင်းရော၊ အဆိုးဘက်မှာပါ အသုံးချလို့ရတဲ့ ကြားနေ Character ပုံစံဖန်တီးထားတာ အ​ကြွေဆုံးပဲ။ Inverted Commas (“) လေးတွေက ဒီဂိမ်းမှာ တစ်ခုတည်းသော မြှုပ်ကွက်လေးတွေဖြစ်ပြီး အဲဒါလေးတွေစုနိုင်ရင်တော့ Hero’s Journal ရဲ့ ဆိုလိုရင်းဇာတ်လမ်းအနှစ်ချုပ်ကို ဖတ်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။ ဂိမ်းက အရမ်းအခက်ကြီးထဲမပါပေမယ့် သွေးတန်းနဲ့ဆော့ရတာမျိုးမဟုတ်လို့ ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဆော့ရင်တော့ ခံရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရယ်ပါ။
Typoman မှာ ရှားရှားပါးပါးသဘောမကျမိတဲ့အထဲ သူ့ Control Style ပါတယ်။ ရှေ့၊ နောက် သွားတဲ့ခလုတ်ရယ်၊ ခုန်တဲ့ခလုတ််ရယ်က သေးတာကြောင့်ပဲလားမသိ၊ တစ်ခါတစ်လေ မမိသလို ခံစားရတယ်။ ဥပမာ ပြေးခုန်ရတဲ့နေရာမျိုးမှာပေါ့။ ပြီးတော့ သူ့မှာ ပစ္စည်းကိုင်၊ သယ်၊ စာလုံးစီဖို့ Function Key ၃ ခုပါတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုကို ကိုင်ပြီးမှ သယ်လို့ရသလို ကိုင်ပြီးရင် လွှတ်ချမလား၊ ပစ်ချမလားဆိုတာ ရွေးခွင့်ရှိတယ်။ ဆိုတော့ တစ်ခါတစ်လေ အမြန်ဆော့ရတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာ ပစ္စည်းကိုင်ရ၊ ချရတာ တိုင်ပတ်တော့တာပါပဲ။ Button တွေကိုလည်း ပြန်ပြင်ခွင့် မပေးထားဆိုတော့ Joy Stick နဲ့မဆော့ချင်ရင်တော့ နဲနဲဂရုစိုက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ဒါကတော့ သဘောမကျတာထက် အားမရတဲ့အချက်။ Typoman က Duration အတော်နဲတဲ့ဂိမ်းထဲပါတယ်။ Stage ၃ ခုကိုမှ အခွဲလေးတွေထည့်ပေးထားတယ်။ ဟိုစမ်းစမ်း၊ ဒီစမ်းစမ်း၊ ဟိုသေ၊ ဒီသေနဲ့ ဆော့တာတောင် ၄ နာရီမပြည့်ခင် ပြီးတယ်။ ဆိုတော့ စိတ်ပါရင် တစ်ဘရိတ်တည်း ထိုင်ဆော့နိုင်တဲ့ဂိမ်းမျိုး။ Story ကို ဒီထက်နဲနဲ ပိုရှည်စေချင်ပေမယ့် ဂိမ်းရဲ့အရသာမပျက်အောင် ထိန်းသွားတယ်လို့ပဲ ယူဆလိုက်ပါတယ်။
Limbo နဲ့ ကွာတဲ့အချက်ထဲ သူ့ရဲ့ Sound Support ပိုင်းလည်းပါမယ်။ ပြိုပျက်နေတဲ့ မြို့၊ သံထည်တွေနဲ့ အဆောက်အအုံ၊ နောက်ခံရှုခင်းတွေပေါ်မူတည်ပြီး ထည့်ပေးထါးတဲ့ Sound Effect က Game ကို ရုပ်လုံးပိုကြွစေတယ်။ ရန်သူလာရင် တစ်ချက်တစ်ချက် အသံနဲနဲစူးတာကလွဲရင် နားကြပ်လေးတပ်၊ Feel အပြည့်နဲ့ဆော့ကောင်းတဲ့ Game မျိုးလို့ မြင်တယ်။
Mainly Black & White ဆိုပေမယ့် လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ လိုအပ်သလို Simple ဖြစ်တဲ့ Color အစပ်အဟပ်ကို တွေ့ရတယ်။ အနီးစပ်ဆုံးဥပမာပေးရရင် Badland တို့ပုံစံမျိုးပဲ။ စာလုံးတွေပေါ် အခြေခံပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ Character Design တွေက Visual ထက် Idea ကို ပိုချီးကျူးရမှာပါ။ Background Visual ပိုင်းကို ပိုပြီးအားရမိတယ်။
ဒီဂိမ်းက PC, PS4 တို့လို Platform တွေအတွက် ထွက်ပြီးအတော်ကြာမှ Mobile ပေါ် ရောက်လာခဲ့တာမို့ ဘယ်လိုကွာခြားမှုတွေရှိမလဲတော့ တပ်အပ်မပြောတတ်။ သို့ပေမယ့် Mobile ပေါ်မှာ Underrated ဖြစ်လွန်းတဲ့ တန်ဖိုးရှိဂိမ်းတစ်ခုလို့ ခံစားမိတယ်။ Puzzle Game အမည်ခံထားပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ “Simple is the best” ဆိုတဲ့ Logic ကို သုံးပြီး အရမ်းတွေးလွန်းတဲ့ Player တွေကို အရူးလုပ်တာမျိုးတွေလည်း ကြုံရတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ အတော်အသင့်သိရင်တောင် ဆော့ရအဆင်ပြေမယ့်ဂိမ်းပါ။ မသိရင်လည်း Screen ရဲ့ ညာအပေါ်ထောင့်က “?” လေးနှိပ်ပြီး မေးလို့ရတယ်။ (ကြော်ငြာတော့ ကြည့်ရတာပေါ့) ပြီးတော့ Journal အတွက် ဝှက်ထားတဲ့ ” လေးတွေ ရှာရတာလည်း ပျော်စရာပါ။ ဆိုတော့ ကိုယ့်စွမ်းကိုယ်စနဲ့ အရသာခံဆော့ရင်တော့ ပိုပြီးကြာကြာဆော့ရမယ်လို့ ထင်မိတယ်။
Typoman မှာ Limbo ထက် ပိုသဘောကျမိတဲ့အချက်က Ending ပါ။ Final Boss ကို နိုင်ပြီးချိန်မှာ ဆက်ဖြစ်တာလေးတွေကို ပြတဲ့ Climax က Player တွေကို Developer တွေက ဂုဏ်ပြုတဲ့ Feeling မျိုးရတယ်။ ဖုန်းပေါ်မှာဆော့တဲ့ အားသာချက်ပဲပြောရမလား၊ Final Boss ကို Fight တဲ့အခါမှာ လူလည်ကျလို့ရတဲ့နည်းလေး ရှိတယ်။ အဲဒါကိုတော့ Spoiler ဖြစ်မှာစိုးလို့ မပြောတော့ဘူး။ (သိချင်ရင်တော့ မန့်မှာဖြစ်ဖြစ်မေးပေါ့။ 😁)
ဆိုတော့ Typoman Mobile က ဒီတိုင်းဂိမ်းတစ်ခုဆိုတာထက် ပိုပါတယ်။ သေချာအာရုံစိုက်ဆော့ရင် လူ့ဘဝရဲ့ ဒဿနတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ရိုးရှင်းတဲ့စာလုံးလေးတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းဖော်ပေးထားတာ တွေ့ရလိမ့်မယ်။ စကားလုံးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့အကျိုး၊ အပြစ်တွေကိုလည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထောက်ပြထားတယ်။ လက်ရှိ Playstore မှာပေးထားတဲ့ Free Version က ၃ ခါသေရင် ထပ်ဆော့ဖို့ ကြော်ငြာကြည့်ရပါတယ်။ ၇ စက္ကန့်စာလောက်ပဲမို့ မနှမြောပါနဲ့။ ကြော်ငြာတွေမမြင်ချင်ရင်တော့ Paid Version ဝယ်ဆော့ပါ။ Developer တွေရဲ့အားထုတ်မှုကို တန်ဖိုးထားပါ။ ခင်များတို့အ​နေနဲ့ ဒီဂိမ်းကိုဆော့ပြီးချိန်မှာ ဂိမ်းတစ်ခုနိုင်သွားတယ်ဆိုတာထက်ပိုတဲ့ အသိတစ်ခုရလိုက်ရင် ဒီ Review ရေးရတာ တန်ပြီလို့ ယူဆလိုက်ပါ့မယ်။
၂၀၂၀ မှာ iPhone တွေ ဘယ်နှစ်မျိုးထုတ်နိုင်မလဲ တွေးမိသလောက်
Samsung ရဲ့ ရင်ထဲထိစေသော လူသားဆန်တဲ့ Emotional ကြော်ငြာ